Isilawuli Magnets - China Ningbo Sine
Isilawuli Magnet Isilawuli Magnets Umkhiqizi Sine Magnetic Company Limited Isilawuli odonsa kukhona igama jikelele for odonsa unomphela lisetshenziswe kwaze, izikhulumi kanye headphones. Magnets kukhona izingxenye ezisemqoka zalezi izinhlobo impahla. Inikeza ensimini unomphela kazibuthe ngoba le lale isikhulumi, ngokushesha kushintshana isiqondiso zamanje kuletha Isigaxa isixwayisi emuva naphambili, bese isignali umsindo uvela isikhulumi. I odonsa elisetshenziswa izipikha-headphone kukhona m ...
Magnets IsilawuliUmkhiqizi Sine Magnetic Inkampani Limited
Isilawuli odonsa kukhona igama jikelele for odonsa unomphela lisetshenziswe kwaze, izikhulumi kanye headphones. Magnets kukhona izingxenye ezisemqoka zalezi izinhlobo impahla. Inikeza ensimini unomphela kazibuthe ngoba le lale isikhulumi, ngokushesha kushintshana isiqondiso zamanje kuletha Isigaxa isixwayisi emuva naphambili, bese isignali umsindo uvela isikhulumi.
I odonsa elisetshenziswa izipikha-headphone lingama odonsa neodymium futhi ferrite odonsa . Basuke ezimise indandatho noma disc ezinobukhulu obuhlukahlukene. Odonsa Ferrite ngokuyinhloko asetshenziswa kuphele ongaphakeme futhi imibhobho ezishibhile futhi ama-headphone. Ikhwalithi ithoni ngeke kumjabulise. Ferrite isikhulumi odonsa ngokuvamile izindandatho enkulu osayizi D72xd32x15mm, D60xd24x13mm, D90xd36x17mm, D90xd36x15mm, D36xd18x8mm, D80 x d40 x 10mm, D80x d40 x 15mm, D90 x d50 x 15mm, D110x d60 x 15mm, D110 x d60 x 17mm, D110 x d60 x 18mm kanye njll
Nakuba neodymium odonsa unomphela bavame isicelo naphakathi namabanga aphezulu-headphone. Ikhwalithi ithoni kuyinto enhle kakhulu, kuyaqina umsindo kungcono, ukusebenza izwi kuhle futhi ukuma ensimini umsindo linembile. Nge Yizinga eliphakeme, wosayizi omncane nokukhanya neodymium odonsa kungaba azixoshe wosayizi omkhulu futhi elisindayo ferrite odonsa kwezinye izinhlelo zokusebenza kancane kancane.
osayizi evame ukusetshenziswa of neodymium isikhulumi odonsa kukhona D50x12mm, D50x10mm, D6x1mm, D6x1.5mm, D6x5mm, D6.5 × 1.5mm, D6xd2x1.5mm, D12x1.5mm, D12.5 × 1.2mm nokunye. A ezihlukahlukene osayizi kungenziwa egcizelele njengoba ngamunye amakhasimende kanye nezidingo abasebenzisi '.
Olandelayo: Magnetic Hlunga Bar
Ontantela phezulu-Bluetooth Isilawuli